Kulan lagu sagootinayey howl-wadeeno kamid ah shaqaalaha hey’adda Bisha Cas ee Turkiga oo lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Kulankaan oo lagu sagootinayey howl wadeeno kamid ah shaqaalaha hay’adda Bisha cas ee dalka Turkiga oo howlo kala duwan u qabtay shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena lagu soo dhaweynayey shaqaale kale oo hey’adaasi katirsan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaa ka qeyb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, masuuliyiin katirsan wasaaradda arimaha gudaha, xubno matalayey ururka haweenka qaranka culumaa’udiin iyo marti sharaf kale.
Kulanka waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka shaqaalahan intii ay ka howlgalayeen dalka, oo ay ugu dambeysay gargaarkii dhawaan Turkiga uu soo gaarsiiyey shacabka Soomaaliyeed, iyadoo dhinacyadii ka qeyb galay ay ku amaaneen shaqaalahan doorka wanaagsan oo ay ka qaateen howlaha lagu gargaarayey dadka Soomaaliyeed.
Gudoomiye ku xigeenka Ururka Haweenka Qaranka Canab xasan Cilmi, iyo gudoomiyaha Ururka Haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa labaduba amaanay kaalinta Turkiga ee Soomaaliya.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka mudane C/rashiid Maxamed Xidig ayaa u sheegay howlwadeenada cusub ee hey’adda bishaca cas ee Turkiga in ay ka fakaraan sidii dalka ay uga hirgalin lahaayeen mashaariic kala duwan oo anfaca dadka Soomaaliyeed.
“Waxaan fileynaa inaad ka fakartaan mashaariic cusub oo dalka wax badan kusoo kordhiya kuna soo dhawaada dalkiina iyo dadka Soomaaliyeed”ayuu yiri Xidig.
Turkiga ayaa ka qeyb qaatay horumarada kajira Soomaaliya, isagoo sameeyey howlo la xiriira dhinaca gargaarka, waxbarashada iyo caafimaadka.